Cadeynaya Wakiilka, Nucleating Agent ee Kordhinta Xasiloonida - BGT
Waxyaabaha lagu daro ee loogu talagalay dib-u-warshadaynta caaga
Faydi khad BT-301/302
Faydi khad BT-300
Xayeysiinta PET-ka ee Qalabka BT-336
Tianjin Sayniska Ugu Fiican & Teknolojiyada Co., Ltd. (China BGT) waa hay'ad warshadeed iyo ganacsi ku howlan soo saarida iyo dhoofinta kiimikooyinka tikniyoolajiyadda sare. Shiinaha BGT waxaa la aasaasay sanadkii 2000. Wax soo saarka ugu muhiimsan waa wakiilo kala cadeynaya, wakiilo kale oo nukleeriya iyo waxyaabo lagu daro bacda dib loo warshadeeyo kuwaas oo loo dhoofiyay dalal badan oo ka tirsan Koonfurta Aasiya Aasiya, Bariga Dhexe iyo Yurub muddo ku dhow 20 sano oo wanaagsan. iyo tayo deggan.
kiiskayaga daraasad kiis
Sifeeyaha wakiilka waxaa loo isticmaali karaa in lagu xoojiyo hufnaanta iyo kordhinta iska caabinta kuleylka ee polypropylene iyadoo loo marayo nukleerka polymerka. Tani waxay sidoo kale horseedaa adkaansho la xoojiyay oo ah qaybta mideysan iyo waqtiga wareegga oo gaaban inta lagu jiro howsha waxqabadka. Noocyada noocan ah ee qaaciddada qaabdhismeedka noocan ah waxaa oggolaaday FDA oo la oggol yahay iyadoo la adeegsanayo xiriirada cuntada ee suuqa adduunka.
Adoo adeegsanaya Wakiilka Nucleating, astaamo badan oo badeecada ah ayaa la horumarin karaa, oo ay ku jiraan adkeynta maaddada, dhalidda awood kacsanaanta, xoogga saameynta, isbeddelka isbeddelka, heerkulka kuleylka kuleylka, xasilloonida. Sidoo kale waxay si cad u wanaajin kartaa waxqabadka indhaha iyo farsamada ee alaabada. Waa budo cad oo aan sun lahayn oo aan ur lahayn.
Dufcaddii 'Transparent Master Datch' waxay ku habboon tahay cusbada macmalka ah ee 'PP & PE' iwm. Waxay xoojin kartaa hufnaanta iyo hufnaanta badeecada, xoogga silloonida, qallafsanaanta, heerkulka khalkhalka kuleylka iyo xasiloonida cabbirka, waxay yareyneysaa wareegga qaabeynta. Waxaa badanaa lagu adeegsadaa wax ka beddelka alaabada irbadda caagga ah ee PP iyo soo saarista PP, PE iftiinka sare ee gudbinta iftiinka filimka, tusaale ahaan cuntada, qalabka wax lagu qurxiyo ee la isku qurxiyo, weelka caafimaadka iwm.
Wakiilka Nucleating PET
Nucleator is adkeeya
Wax soo saarkayaga ayaa loo dhoofiyay dalal badan oo ku yaal Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe iyo Yurub.
Wax soo saarka BGT waa alaab tiknoolajiyad sare leh, oo leh qeexitaan sare, aan sun lahayn, sifooyin aan dhadhan lahayn.
Markasta oo aan helno farsamo yaqaanno xirfadlayaal ah oo aan uga jawaabo su'aalahaaga.
Wax soo saarkayaga ayaa si ballaaran loo isticmaalaa Macluumaadkeena ugu dambeeyay
Wakiilka Nucleating Transparent Dibenzylidene Sorbitol
Dibenzylidene sorbitol Agent Transparent Nucleating Agent waxaa loo qaybin karaa saddex nooc, oo sidoo kale loo yaqaan badeecada jiilka saddexaad. Jiilka koowaad waa DBS. Shaygaani wuxuu leeyahay heer hoose oo permeability iyo aldehyde aad u adag ...
Waa maxay Wakiilka Transparent Nucleating
Wakiilada guud ee wadajirka ah ee loo yaqaan 'nucleating nucleus' waxaa loo qaybin karaa laba nooc: iskudhisyo dabiici ah iyo iskudhaf aan dabiici ahayn. Wakiilada Nucleating-ka ee Noolaha ah ayaa badanaa ah oksaydhka biraha, sida talc, silica, titanium dioxide, benzoic acid iyo wixii la mid ah ....
Sababtoo ah iska caabinta heerkulka sare, culeyska khaaska ah ee khafiifka ah, farsamaynta fudud iyo qaabeynta, dib u warshadaynta fudud, iyo qiimaha hoose, polypropylene ayaa si ballaaran loogu isticmaalay warshadaha kiimikada, kiimikada kiimikada, qalabka guryaha, baakadaha, warshadaha iftiinka iyo warshadaha kale. Sidee ...
Hoos u dhig ciriiriga iyo Kobcinta hufnaanta Polypropylene
Sharaxaadda Wakiilka waxaa loo isticmaali karaa yareynta qiiqa iyo kor u qaadista hufnaanta polypropylene iyada oo loo marayo nukleerka polymerka. Tani waxay sidoo kale horseedaa adkaansho la xoojiyay oo ah qaybta mideysan iyo waqtiga wareegga oo gaaban inta lagu jiro howsha waxqabadka.
Adiga Ku Sugaya Shenzhen 2021!
Chinaplas waa mid ka mid ah bandhigyada ugu fiican adduunka ee caagagga iyo alaabada ceyriinka caagga ah kuwaas oo ay aad u qiimeeyaan soo booqde kasta iyo soo bandhige halkaas jooga. Sannadkii hore, intii lagu jiray bandhigga, qof kastaa wuxuu ahaa mid aad u sarreeya qof walba ...
TIANJIN BILAASHKA SAYNISKA IYO FARSAMADA CO., LTD
B603 United Dhismaha, No.51 Youyibei Road, Degmada Hexi, Tianjin, Shiinaha.